Mastiff: ဒီမျိုးစိတ်၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ဂရုစိုက်မှုကိုသိပါ ကမ္ဘာ့ခွေးများ
ဒီအမြိုးကို၎င်း၏ပိုင်ရှင်တွေအပေါ်ရဲရင့်ခြင်းနှင့်ချစ်ခင်စုံမက်ခြင်းအဘို့အထူးခြားစဉ်းစားသည်, အစောင့်ခွေးအဖြစ်အလွန်ကောင်းသောဖြစ်, ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည် ကြီးမားသော estates သိုလှောင်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ခွေးတစ်ကောင်အနေဖြင့်၎င်း၏ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့်ကုမ္ပဏီကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်အလွန်အမင်းအကြံပြုထားခြင်းသည်၎င်းကိုအသုံးဝင်သည်။
ရာစုနှစ်များစွာအတွင်း၊ ကျီးကန်းတို့သည်သိုးစုကိုလိုက်ရှာ။ ၊ ဝံပုလွေတိုက်ခိုက်မှုကနေတိရစ္ဆာန်များကာကွယ်ခြင်း။ သင်ဤဖောက်သည်အကြောင်းကိုအသည်းအသန်ဖြစ်ပါသလား ထို့နောက်ဤစာမူနှင့်ဆက်နွှယ်သောအရေးကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း။ အရေးကြီးဆုံးကဏ္aboutများကိုရှာဖွေရန်ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ ၎င်း၏ function ကိုသက်သက်သာအကာအကွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းကိုပထဝီဒေသအပေါ် မူတည်၍ အခြားအမည်များဖြင့်လည်းသိကြပြီး၎င်းတို့အနက်မှတစ်ခုမှာနွားခွေးဖြစ်သည်။
စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်မှာသင်သည်မြင့်မြတ်သောလူမျိုး၏သမိုင်းကြောင်းကိုသိပြီး ၁၉၈၁ ခုနှစ်တွင်စပိန်အသင်း၏အသင်းဖြစ်သည် စပိန် Mastiff ခွေး.
ဒီအသင်းအဖွဲ့ကစည်းရုံးရေးအတွက်စိတ်ကူးရှိခဲ့တယ် ဒီဖောက်ပေါ်သတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းရန်အစီအစဉ် ရှေးကာလ၌။ ထို့ကြောင့်သူသည်နွားခွေးဟောင်းများနှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုပြန်လည်ရယူရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ပုံစံအသစ်တစ်ခုကိုရေးဆွဲခဲ့သည်။
၎င်းတို့တွင်၎င်းတို့ကိုသတ်မှတ်ပေးပြီးဝိသေသလက္ခဏာပေးသော attribute များရှိသည် ၎င်းတို့သည်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အစောင့်ခွေးများအတွက်အသုံးပြုနိုင်သောမျိုးဆက်များဖြစ်သည်။ အေ
၎င်းသည်ခွေးကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်ခြင်း၊ အမှန်တကယ်ကြံ့ခိုင်ခြင်း၊ ဒါဟာဒီကဆိုပါတယ်ဖြစ်ပါတယ် ဒါဟာစပိန်တွင်တွေ့မြင်အကြီးဆုံးဖောက်ဖြစ်ပါတယ်။
၎င်းသည်သူစိမ်းများ၏ရှေ့မှောက်၌အလွန်ခိုင်မာသောခိုင်မာသောယုံကြည်မှုကင်းမဲ့သောလူမျိုးဖြစ်သည် သူ့ကိုယ်သူအလွန်သေချာ။ ၎င်း၏သားမွေးသည်သိပ်သည်းပြီးသိုးမွေးဆံတစ်မျိုးရှိပြီးနွေရာသီတွင်ရှုံးသော undercoat တစ်ခု၏အသွင်အပြင်ကိုပေးသည်။
သူတို့ရဲ့အရောင်ကတော့အဖြူ၊ အနက်နဲ့ brindle ကပိုများတယ်။ သူတို့၏အရှည်သည် ၆၀ နှင့် ၈၀ စင်တီမီတာဖြစ်သည်။ သူတို့သည်ယောက်ျားဖြစ်စေမိန်းမဖြစ်စေမတူသည်။ အလေးချိန် ၄၀ မှ ၇၀ ကီလိုဂရမ်ကြားရှိသည် သူတို့ဖြစ်နိုင်သည် 90 ကီလိုဂရမ်ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်ပေမယ့်။
သူတို့ကမကြာခဏမွေးမြူရေးအဖြစ်ခြံများနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစောင့်ရှောက်ရန်အသုံးပြုကြသည်။ ထုံးစံအတိုင်း, သူတို့အတော်လေးမျှတမှုရှိတယ်ကောင်းသောအဖော်ခွေးအဖြစ်သူတို့ကိုအရိပ်လက္ခဏာ။ ပျမ်းမျှသက်တမ်းသည်ရှစ်နှစ်မှဆယ်နှစ်အတွင်းဖြစ်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပတ်သက်၍ မိသားစုများ၊ ကျေးလက်ပတ်ဝန်းကျင်၊ စားကျက်နှင့် / သို့မဟုတ်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရန်အလွန်ကောင်းမွန်သည်ဟုဆိုနိုင်သည်။
သူကသူသည်စပိန်နိုင်ငံတွင်အကြီးဆုံးမျိုးဆက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဆိုနိုင်သည်။ ၎င်း၏ဇာစ်မြစ်နှင့်ဇာစ်မြစ်နှင့်ပတ်သက်။ သံသယရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်အဖြစ်မှန်နှင့်နီးစပ်သောသမိုင်းဆိုင်ရာဒေတာရှိပါတယ်; ဖိုနီးရှားလူမျိုးနှင့်ကဲလ်စ်တစ်လျှောက်ထိုနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိခဲ့သည် ရောမတို့သည်ခွေးကောင်များအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
သံသယဖြစ်စရာမလိုသည်မှာအလယ်ခေတ်ကသူတို့အသုံး ၀ င်မှုကိုနွားအုပ်ထိန်းသူများအဖြစ်ဗဟိုပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်း၏ဂုဏ်သတ္တိများတစ် ဦး ၏ဂုဏ်သတ္တိများဖြစ်ကြသည် အတော်လေးခေတ်ရဲ့သွက်လက်တဲ့, မွေးမြူရေးကိုခုခံကာကွယ်နိုင်စွမ်းကိုမွေး သငျသညျခြိမ်းခြောက်ခံစားရလျှင်အခြားတိရိစ္ဆာန်များမှ။
စပိန် Mastiff ခွေးသည်ခွန်အားကြီး။ ကြီးမားပြီးခွေးကောင်ဖြစ်သည်။ ခြေထောက်တွေကသွက်လက်၊ လေးပြီးခိုင်မာတယ်။ သူ့မှာခေါင်းကြီးကြီး၊ floppy နားတွေရှိတယ်။ မျက်လုံးနဲ့ပါးပြင်ပေါ်ကမျက်နှာအရေပြားကချိတ်ဆွဲထားတယ်။
တစ်ကိုယ်လုံးသည်အလွန်ထူသောဆံပင်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။ အရောင်အတွက်, အသုံးအများဆုံးဖြစ်ကြသည် အစိုင်အခဲအရောင်များနှင့် brindle.
၎င်းကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်မှာလွယ်ကူပြီးလေ့ကျင့်ခန်းများစွာလိုအပ်သည် အိမ်ကြီးတစ်လုံးတွင်နေထိုင်ရန်အကြံပြုလိုသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းများမရှိခြင်းကြောင့်သူ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုလျစ်လျူမရှုပါနှင့်။
ဆံပင်အဟောင်းနှင့်အညစ်အကြေးများအားဖယ်ရှားရန်နို့တိုက်သည်။ လှေကားထစ်များကိုအပြီးတိုင်းစစ်ဆေးပါ ပြီးတော့ရေချိုးတာကသူ့နားရွက်ကိုဂရုစိုက်ပါ။
ကြံ့ခိုင်သောအရွယ်အစားမျိုးဖြစ်သောကြောင့်သူသည်တင်ပါးဆိုးရွားသောရောဂါကဲ့သို့သောရောဂါများကိုသတိထားသည်။ မျှတသောအစားအစာကိုသင်စားရမည်ကောင်းသောအစာခြေများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအာဟာရနှင့်အတူ; မိမိ၏ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းကိုဂရုပြုပါ၊
အထူးကျွမ်းကျင်သူကအကြံပြုထားသည့်အတိုင်းအတိုင်းအတာအထိနှိမ်နင်းသင့်သည်။ ကပ်ပါးကောင်များသည်သင့်ခန္ဓာကိုယ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၀ မ်းပျက် ၀ မ်းလျှောခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း၊ အူလမ်းကြောင်းပြတ်တောက်နိုင်ပါတယ်။
သင်သာအကောင့်ထဲသို့မှန်ကန်သောယူရန်ရှိသည် လုံလောက်သော deworming အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အထူးထုတ်လုပ်ထားသောဆေးဝါးများနှင့်အတူ။
ဤဖောက်ခွဲမှုသည်အရွယ်အစားကြီးမားခြင်းနှင့်၎င်း၏ကြံ့ခိုင်သောပုံသဏ္ဌာန်နှင့်ကိုက်ညီသောလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကြောင့်အနည်းငယ်သောကယ်လိုရီစားသုံးမှုကိုလိုအပ်သည်။ ၎င်း၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ဦး စားပေးဖြစ်ပါတယ် တိကျသောအကြံပြုချက်များအားလုံးကိုလိုက်နာရမည်။
၎င်းသည်ခွေးပေါက်စတစ် ဦး ဟုတ်မဟုတ်ပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်အစာစားရန်အကြံပြုသည် သေးငယ်တဲ့ဝေမျှနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်များတွင် အနည်းဆုံးတစ်နေ့လျှင်သုံးကြိမ်နှင့်တိရစ္ဆာန်လိုချင်လျှင်သူသည်သူ၏အစာစားခြင်းအလေ့အထကိုစည်းကမ်းလိုက်နာရန်ဖြစ်သည်။
အလားတူနှင့်အကြံပြုချက်များအတွင်း သင် antioxidants ကိုစားသောကောင်းလှ၏, သူတို့သည်ကောင်းသောအင်္ကျီကိုစောင့်ရှောက်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင့်။ ထိုနည်းတူစွာပင်သူ၏အဆစ်များကိုကာကွယ်သည့်ပရိုတင်းများနှင့်အစားအစာများအားလုံးကိုသူနှင့်အတူထောက်ပံ့ပါ။
သူတို့သည်အဝလွန်ခြင်းနှင့်ပြaနာရှိသောကြောင့်သူတို့၏အလေးချိန်နှင့်အခြားအစားအစာမညီမျှမှုများကိုသင်ကြည့်ရှုရမည်။ အထူးကျွမ်းကျင်သူနှင့်သင်၏တိုင်ပင်ဆွေးနွေးများကိုလည်းစောင့်ကြည့်ပါ၊ အဆိုပါ Mastiff ဖြစ်ပေါ်နေသောဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လို.
၎င်းကိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်အစားအစာများစားပြီးနောက်လမ်းလျှောက်ခြင်းများကိုစဉ်းစားရန်မစဉ်းစားပါနှင့်။ အစာခြေကောင်းစွာလည်ပတ်နိုင်ရန်အတွက်အချိန်အတိအကျကိုစောင့်ဆိုင်းခြင်းသည်ကောင်းသည်၊ သို့မဟုတ်ပါကပြproblemsနာများဖြစ်စေနိုင်သည်။
သူ့ကိုကပ်ပါးကောင်များထံမှကာကွယ်ပါ။ သင်၏တိရိစ္ဆာန်ဆရာနှင့်ကာကွယ်ဆေးထိုးအချိန်ဇယားထားပါ။ ဤဖောက်သည်သည်ဂရုစိုက်မှုများစွာလိုအပ်သည်၊ တစ် ဦး တည်းခံစားရခြင်းသို့မဟုတ်ချစ်ခင်တွယ်တာခြင်းမခံရခြင်းက၎င်းအားအပျက်သဘောဆောင်သောတုံ့ပြန်မှုများဖြစ်ပေါ်စေပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဤပြissueနာတွင်ဖော်ပြထားသောကျန်းမာရေးပြproblemsနာများအနက်တစ်ခုမှာ တင်ပါးဆုံရိုး dysplasia, သင်သည်အချို့သောနာကျင်မှုဖြစ်စေခြင်းငှါနှင့်သင်ပင်အားလျော့ပေမည်။ လေ့ကျင့်ခန်း၊ အားကစား၊ အစာနှင့်လမ်းလျှောက်ခြင်းများနှင့်အတူ၎င်းကိုသက်သာအောင်လုပ်နိုင်သည်ကိုသင်သိပြီးဖြစ်သည်။
အစာအိမ်လိမ်ပြproblemsနာများထွက်သည် Watch။ အကယ်၍ သင်သည်အစားအစာစားသုံးမှုကိုတစ်နေ့လျှင်အကြိမ်အနည်းငယ်မျှသာပါဝင်သည်ကိုဂရုစိုက်ပါကသူတို့၏ကျန်းမာရေးနှင့်သုခချမ်းသာကိုစစ်ဆေးပါမည်။
ထို့ကြောင့်အဆိုပါစပိန် Mastiff ခွေးကြီးတစ်ကောင်သည်ခွေးပိုင်ရှင်အပေါ်သစ္စာရှိသောခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်သည် နှင့်ကလေးများနှင့်အတူအလွန်ချစ်ခင်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခွေးကမ္ဘာကြီး » အထွေထွေခွေးများ » ခွေးမျိုးဆက်များ » ကဗျာ